Facebook Twitter Bata kero YouTube Instagram Website Phone
Teerera kuRadio Equinoxe
Tumira nziyo dzako
Kugamuchirwa kuRadio Equinoxe
Kumira kwesolar system, Uranus & Neptune
Kekutanga kutepfenyura musi weMugovera Chikumi 25 nenguva dza18 masikati. Rebroadcast neSvondo 26 na22 p.m. Kudzika kwezuva, isu tave pedyo, kana tikafunga kuti Pluto ichiri chikamu chayo, ine duo yakaparadzana kupfuura 1 bhiriyoni 600 mamiriyoni KM Uranus neNeptune. Verenga zvimwe…
Nhoroondo ye Solstice Special
Tokuona Muvhuro, Chikumi 20 kubva na21 p.m. paBandcamp muvhidhiyo uye paRadio Equinoxe mukuteerera kune yakakosha Solstices chirongwa. Pachirongwa: kuratidzwa kweprojekiti uye maartist, uye imwe (kana maviri) kushamisika (s)! Uye ichangopera show, paRadio Equinoxe, kutepfenyura kuzere kwealbum.
Kune yazvino chinyorwa cheCoup de Cœur, isu tichagamuchira imwe yeshamwari dzedu dzakatendeka, Philippe Fagnoni, mutyairi weAstroVoyager, achauya kuzopindura mibvunzo yedu uye kuunza mapurojekiti ake kwauri. Kekutanga kutepfenyura neChishanu Chikumi 3 na18 p.m., yakaburitswa zvakare neSvondo Chikumi 5 na21 p.m. Enda kune chat yemibvunzo yako Verenga zvimwe…
Night Visions: "The Stopovers of the Solar System, Saturn"
Kekutanga kutepfenyura neMugovera Chivabvu 28 na18 p.m., yakaburitswa zvakare neSvondo Chivabvu 29 na22 p.m. Kumira kwedu musolar system kunosvika ku1.5 bhiriyoni km. Isu tichabhururuka pamusoro penzvimbo yeSaturn nemhete dzayo dzine mukurumbira. Kutenderera uye kufambira mberi mumhanzi weVisions Nocturnes. Asati atombopora kubva pakutsakatika kwaKlaus Schulze, Verenga zvimwe…
Nhau dzeGoogle - Jean-Michel Jarre
Jean-Michel Jarre: "Europe inofanirwa kuve neyayo metaverse"
Bvunzurudzo - Muimbi wemimhanzi yemagetsi, ane chido chekuvandudza, anozviona sechinhu chekutonga kwetsika kune Old Continent. Verenga zvimwe… Verenga kwabva...
Pierre Mourey, murume ari mumumvuri
Jean-Michel Jarre akarekodhwa pachiteshi cheSNCF, Pierre Mourey akabatana naye paChants Magnétiques. Verenga zvimwe… Verenga kwabva...
Nhau dzeGoogle - Mumhanzi wemagetsi
Vault: nzvimbo itsva yakatsaurirwa kumumhanzi wemagetsi yakavhura maminetsi gumi nemashanu kubva kuParis
Kubva kutanga kwaChikumi, nzvimbo huru yechitatu yakavhura mikova yayo kunze kweParis, kuLe Bourget: Vault. Verenga zvimwe… Verenga kwabva...
Mutambo wekutanga: yekutanga edition yemutambo wemimhanzi yemagetsi ichatangwa muBordeaux muzhizha rino
Fever, chikuva chekuwanikwa kwezviitiko, iri kuronga Mutambo Wekutanga, mazuva maviri emimhanzi yemagetsi 30 maminetsi kubva pakati peBordeaux musi waChikunguru 9 uye 10. Verenga zvimwe… Verenga kwabva...
Saint-Symphorien-des-Monts. Kudzoka kwemagetsi uye psychedelic music festival
Mhemberero yemagetsi uye yepfungwa yemimhanzi Ethereal Decibel Open Air Festival yakadzoka musi weChishanu 1, Mugovera 2nd uye Svondo 3 Chikunguru pane 10 hectares yeyaimbova Saint-Symphorien-les-Monts mhuka park. Verenga zvimwe… Verenga kwabva...